HRW oo eedeysey DF Somalia
29 Mar 29, 2012 - 9:06:59 AM
Human Rights Watch ayaa ku eedeysey maleeshiyo taabacsan DF Somalia inay dilal qorshaysan iyo falal ka baxsan bini’aadanimada goobaha ay dhowaan ka sifeeyeen kooxda Al-shabaab koonfurta Somalia.
Warbixin cusub oo maanta 29,March 2012 ka soo baxdey HRW ayaa lagu sheegey tan iyo markii ay ciidamada Ethiopia iyo maleeshiyadka raacsan DF Somalia ay ka saareen Al-shabaab Beledweyne iyo Baydhabo inuu xaalku sii noqdey mid aad u liita.
Sida laga soo xigtey warbixinta muwaadiniin ayaa ciidamada amaanku toogteen ama xireen kuwaasi oo la aaminsanyahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Al-shabaab ama taagersanyihiin.
Sidoo kale warbixinta ayaa lagu cadeeeyey in kooxda ku xiran Al-Qacida ay weli weeraro ku soo qaado ciidamada Ethiopia iyo xoogaga isbahaystaan.
Dhinaca kale Aadan Axmed Cumar oo ah taliye ciidamada dowladda Somalia Baydhabo ku sugan ayaa beeniyey eedeymaha ay soo jeedisey Human Rights Watch waxan uu ku tilmaamey kuwo been abuur ah asalna aan lahayn.
‘’Anagu qofna ma dilno ,cidnana ma jirdilno ,hadii ay noqoto inaan cid soo xirno maxkamada ayaanu u gudbinaa’’ ayuu raaciyey isaga oo u waramayay midka mid ah idaacada dalka.